Unleashed Your Leadership Potential at Mya Yeik Nyo Royal Hotel -Yangon, Yangon
Unleashed Your Leadership Potential
Venue Mya Yeik Nyo Royal Hotel -Yangon, Mya-Yeik-Nyo Hotel(Yangon), Yangon, Myanmar
Created by Pyay Khai Follow Contact Promote Your Event
✋မိတ်ဆွေ ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ အချိန် ✌ ၂ ရက်သာပေးပါ..
?၂ ရက်တာအတွင်း မိမိရဲ့ Leadership Skill ကို လုံးဝပြောင်းလဲသွားအောင်၊ မိမိရဲ့ခေါင်းဆောင်မှု စွမ်းရည်မှာ ဘာတွေ လိုအပ်နေသလဲ ဆိုတာကို သတိပြုမိအောင် ထိရောက်တဲ့နည်းစနစ်တွေနဲ့ သင်ကြားပေးမဲ့ သင်တန်းတစ်ခုကို မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။?
? ဒီကနေ့ ခေတ်ကြီးမှာ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု အောင်မြင်ခြင်း၊ ကျရှုံးခြင်းဟာ ဒီအဖွဲ့အစည်းကို ခေါင်းဆောင်နေတဲ့ လူတွေရဲ့ အရည်အချင်းအပေါ်အများကြီး မူတည်နေပါတယ်။ ခေါင်းဆောင်မှု အရည်အချင်းကလည်း ခေါင်းဆောင်တိုင်းမှာ ရှိနေနိုင်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ တကယ်ခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေဟာ သူတို့အကုန်လုံးမသိနေနိုင်ဘူးဆိုတာကို လက်ခံတတ်သူတွေ ဖြစ်ပြီး သူတို့ စီးပွားရေးနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ ပညာရပ်တွေကို အမြဲလေ့လာနေတတ်သူဖြစ်သလို သူတို့ရဲ့ ခေါင်းဆောင်မှုအရည်အချင်းတွေကိုလည်း ပိုပြီးတိုးတက်လာအောင် အမြဲလေ့လာနေတတ်သူတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ??? အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရဲ့ အောင်မြင်မှုကို မြှင့်တင်နိုင်အောင် Unleashed Your Leadership Potential ဆိုတဲ့ လူကြိုက်အများဆုံး ခေါင်းဆောင်မှုသင်တန်းမှာ မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ နှစ်ရက်တာ အချိန်ကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုက်ပါ။ အလွန်တန်ဖိုးရှိမယ့် ၂ ရက်ဖြစ်မယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ဘက်က ယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိပါတယ်။
တစ်ဆက်တည်းမှာပဲ အောက်က မေးခွန်းများကို ဒီ ၂ရက်တာ ULP သင်တန်းက အဖြေထုတ်ပေးသွားပါလိမ့်မယ်။
✅ သင့်ရဲ့ တိုးတက်မူကို ဘာတွေက ဟန့်တားနေတာလဲ?
✅ ကိုယ့်နဲ့လက်တွဲလုပ်နေတဲ့သူတွေက ကိုယ့်ကိုဘယ်လိုဆက်ဆံနေတာလဲ/ ကိုယ်ကရော သူတို့ကိုဘယ်လိုမျိုးဆက်ဆံမိနေသလဲ….?
✅ အလုပ်လုပ်ရတာ ပျော်ရွှင်မူကိုဘာကြောင့်မရတာလဲ…?
✅ ကိုယ်ပြောသမျှစကားတွေဟာထိရောက်မှု၊ သြဇာညောင်းမူ ဘာကြောင့်မရှိရတာလဲ …?
✅ ကိုယ်ရဲ့ Plan တွေကို ကိုယ့် Team Member တွေက ဘာကြောင့် လိုက်ပါလုပ်ဆောင်မူတွေ အားနည်းနေရတာလဲ…?
✅ လုပ်ငန်းတစ်ခုကို အခုမှစပြီးတည်ထောင်နေသူတွေရဲ့ အခက်အခဲတွေကို ဘယ်လိုကျော်လွှားမလဲ ဆိုတာကို သိရှိနိုင်ဖို. အခက်အခဲ ဖြစ်နေတာလား…?
✅ သင့်ရဲ. Team ကို ပေးအပ်တဲ့ တာဝန်တွေ ပြီးပြီလားဟု အမြဲမေးနေရ ပါသလား ?
✅ သင့် Company ၊ စီးပွားရေး အလုပ်အကိုင် အပါအဝင် အခြားသော ကိုယ့်ဘဝရဲ. ကဏ္ဍအသီးသီးကို ပြောင်းလဲ လိုပါသလား ?
? အထက်ပါ မေးခွန်းတချို့ ကစာဖတ်သူ မိတ်ဆွေ နှင့် ဆက်သွယ်မှု ရှိနေပါသလား ❓
(၂) ခု ထက်ပိုပြီး YES ! YES ! ဆိုရင် ပြောင်းလဲမှုတွေကို ဘယ်ကနေစပြီး လုပ်မလဲ❓
✔ခေါင်းဆောင် ကောင်းတွေ ၊ မြင့်မားတဲ့ Management Role တွေမှာ အောင်မြင်စွာ ဦးဆောင်ချင် သူတချိူ.မှာ ကျင့်သုံး နေတဲ့ Leadership Skills တွေ တခါတရံမှာ လမ်းကြောင်း လွဲနေတတ်ပါတယ်။ ?
? တခြားသူတွေကို ဦးမဆောင်ခင်မှာ ခေါင်းဆောင် လုပ်မည့် သူမှာ ခေါင်းဆောင်မှု အရည်အချင်းတွေ ၊ အခြေခံ အုပ်မြစ်တွေ ရှိနေသင့်ပါတယ်။ ?
Dr. John C. Maxwell ၏ ခေါင်းဆောင်မှုဆိုင်ရာ သင်ခန်းစာများစွာအနက်မှ 15 Invaluable Laws of Growth ကို အခြေခံထားသည့် Unleash Your Leadership Potential – ULP သင်တန်းကို ရန်ကုန်မြို.တွင် ၂ ရက်သင်တန်းအဖြစ် သင်ကြားပို့ချပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပထမဦးဆုံးသော ABNLP အသိအမှတ်ပြု NLP Trainer ဖြစ်ပြီး ၊ Leadership Guru ကြီး Dr. John C. Maxwell Team ၏ Executive Director ၊ Trainer & Coach ဖြစ်သော ဆရာ ဦးပြေခိုင်မှ အသေးစိတ် သင်ကြားပို.ချပေးမည် ဖြစ်ပါတယ်။
Unleash your Leadership Potential –ULP မှာဘာတွေကိုသင်ကြားပေးမှာလဲ
✔️ Unleash your Leadership Potential – ULP သင်တန်းတွင် Dr. John C. Maxwell ၏ 15 Invaluable Laws of Growth ကို အခြေခံပြီး Neuro Linguistic Programming (NLP) Techniques များ နှင့် V.A.K Learning System များကို အသုံးပြုပြီး သင်ကြားပေးမည် ဖြစ်ပါတယ်။
Unleash your Leadership Potential (ULP) သင်တန်းမှ ရရှိနိုင်သော အကျိုးကျေးဇူးများ (သင်တန်းပြီးရင် ဘာတွေ ဖြစ်လာမလဲ?) ? ? ? ? ? ?
✔ Work Life Balance ကို အကျိူးရှိစွာ အသုံးချနိုင်တဲ့ ခေါင်းဆောင်ကောင်း တွေ ဖြစ်လာမယ်
✔ သင့်ရဲ. Team ကို မှန်ကန်ကောင်းမွန်တဲ့ Vision တွေ ၊ Mission တွေ ချပြနိုင်တဲ့ ခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေ ဖြစ်လာမယ်
✔ သင့်ရဲ. ဘ၀ / Leader တစ်ယောက်ရဲ. ဘ၀အဓိပ္ပာယ်ကို ရှင်းရှင်း လင်းလင်းကြီး သိလာနိုင်မယ်
✔အောင်မြင်နေသော ခေါင်းဆောင် ကောင်းများကို Case Study အနေဖြင့် လူချင်းတွေ. လေ့လာနိုင်မည်။
✔အပြုသဘော စိတ်နေ စိတ်ထား ပိုများလာပြီး စိတ်ဖိစီးမှုတွေ လျော့ကျ လာနိုင်မယ်။
✔လူအများက ချစ်ခင် လေးစားရတဲ့ ခေါင်းဆောင်ကောင်း တွေ ဖြစ်လာမယ်။
✔ခေါင်းဆောင်မှု အရည်အသွေး တိုးတက်လာရန် နေ.စဉ် ဘာတွေ ပြုလုပ် သင့်သည်ကို သိရှိလာမည်
✔Motivation သက်သက် မဟုတ်ဘဲ Long Lasting Change ရရှိအောင် မည်သို.လုပ်ဆောင် သင့်သည်ကို သိရှိလာမည်
✔သင်တန်းကာလတွင် သင့်ဘ၀ အတွက် အရေးကြီးသော Leadership သင်ခန်းစာများ သင်ကြားပေးမည့် အပြင် သင်တန်းပြီးဆုံးသွားချိန်တွင်လည်း ဘယ်လိုဆက်လက် ပြုမှုလုပ်ဆောင်သင့်သည် ကိုပါ သင်ကြားပေးသွားမည်။
✔ULP သင်တန်း ၂ တာအချိန်တွင်း သင့်လုပ်ငန်း၊ အဖွဲ့အစည်း၊ မိသားစု နဲ့ ဘဝအတွက်အနှစ်သာရများကို အကောင်းဆုံးရရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
✅ သင့်လုပ်ငန်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အဖွဲ့အစည်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မိသားစုထဲမှာဖြစ်ဖြစ်… ပြန်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင် အများဆုံးတွေ့ရတက်တာတွေ က ??
➡️ ဝန်ထမ်းမတည်မြဲမူ ပြဿနာတွေ
➡️ အမြဲတမ်းတက်တက်ကြွကြွနဲ့လုပ်ဆောင်ချင်သူများ (သို့မဟုတ်) ဝန်ထမ်းတွေကို တက်ကြွစွာပါဝင်စေလိုသူတွေ
➡️ ဦးဆောင်ပြီးလုပ်ရတဲ့နေရာတွေမှာ အဆင်မပြေ၊ အားမလို အားမရ ဖြစ်နေသူတွေ
➡️ ခေါင်းဆောင်မှုပညာကိုလေ့လာပြီး ဘဝကို တိုးတက်ချင်တဲ့ လူငယ်တွေ
➡️ လက်ရှိရာထူး (သို့) ဝင်ငွေကို ဒီ့ထက်မက မြင့်တက်ချင်သူတွေ
➡️ ကိုယ်လုပ်နေတဲ့နယ်ပယ်က ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေကို အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းနဲ့ကျော်လွှားချင်သူတွေ
➡️ လုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်ဖို့ မဝံ့မရဲဖြစ်ပြီး အချိန်ဆွဲနေသူတွေ
➡️ လက်ရှိရောင်းအားကို အားမရဖြစ်ပြီး ဒီ့ထက်မြင့်တက်ချင်သူတွေ
ဒါတွေကို ULP သင်တန်းကနေသိရှိပြီး ကျေနပ်မူကိုရစေပါလိမ့်မယ်။ ?
✅ သင့်ကို ပထမ တစ်ရက်အတွင်းမှာကိုပဲ အတွေးအခေါ်၊ လုပ်ငန်းပိုင်း၊ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးက အစ အများကြီးပြောင်းလဲလာပါလိမ့်မယ်။ ၂ရက်ပြီးသွားတာနဲ့ သင်လိုချင်တဲ့ အောင်မြင်မူပန်းတိုင်ဆိုတာဘာလဲ၊ ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့ ဘဝရဲ့လွတ်လပ်ပျော်ရွှင်မူတွေကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိသွားပါလိမ့်မယ်။
✅ စာဖတ်သူ မိတ်ဆွေဟာ ဘဝမှာ အောင်မြင်တဲ့ ခေါင်းဆောင်ကောင်း ၊ ကိုယ့်လုပ်ငန်းနှင့် မိသားစု တိုးတက်အောင် ပြုလုပ်လိုသူ ၊ မိသားစု အတွက် အချိန်ပိုပေးချင်သူ ၊ မိမိလုပ်ငန်းတွေကို ယခုထက်ပိုပြီး အောင်မြင်ပြီး ငွေကြေးပြီးပြည့်စုံသူ တစ်ယောက်ဖြစ်လိုပါက Unleash your Leadership Potential (ULP) သင်တန်းသည် သင်တက်ရောက်သင့်သည့် တစ်ခုတည်းသောသင်တန်းဖြစ်မှာ အမှန်ပါဘဲ။
✅ အောင်မြင်တိုးတက်လိုသူတိုင်း လေ့လာသင်ကြားမူကို အမြဲပြုလုပ်ကြပါတယ်။ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု အောင်အောင်မြင်မြင်နဲ့ ရည်ရှည်သွားနိုင်ဖို့ ခေါင်းဆောင်မူအရည်အသွေးမြင့်မားနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၊ လုပ်ငန်းတစ်ခု အောင်မြင်တယ်၊ မအောင်မြင်ဘူးဆိုတာ ခေါင်းဆောင်တွေပေါ်မှာပဲမူတည်ပါတယ်။
✅ ULP သင်တန်းကိုတက်ပြီးသွားတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအားလုံး လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာ၊ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး နဲ့ ခေါင်းဆောင်မူဆိုင်ရာ စိတ်နေသဘောထားတွေကိုရရှိသွားကြပါတယ်။
✅ ၂ ရက်တာအတွင်းမှာ ခေါင်းဆောင်မူဆိုတဲ့ရသကို အကောင်းဆုံးနားလည်သိရှိသွားပြီး ဘဝကိုလွတ်လပ်ပေါ့ပါး စွာနဲ့ အောင်မြင်ပျော်ရွှင်မူတွေကို သင်ခံစားရပါလိမ့်မယ်။
ဒီအချိန်ဟာ အကောင်းဆုံးအချိန်ပါပဲ… အခုစပြီးမလုပ်ရင် ဘယ်တော့လဲ… ?
Unleash your Leadership Potential (ULP) သင်တန်းကို မည်သူတွေ မဖြစ်မနေ တက်ရောက် သင့်သလဲ?
- HR / Admin Managers
- CEO of companies
- လုပ်ငန်းတွင် ရာထူးကြီးကြီး ရလိုသူများ
- အနာဂတ်တွင် ခေါင်းဆောင်ကောင်း ဖြစ်လိုသူ များ
သင်တန်း သင်ကြားမည့် ဆရာများ
Trainer : U Pyay Khaing
Certified NLP Trainer & Coach
Certified John Maxwell Coach, Trainer & Speaker
Master Trainer at Myanmar Excellence Institute - MEI
“Your Life will Never be the Same After this Training”
Training Schedule in Yangon?
နေ.ရက် ။ ။ 27 - 28 January 2018
အချိန် ။ ။ နံနက် (9) နာရီ မှ ညနေ (7) နာရီ အထိ
နေရာ ။ ။ Mya Yeik Nyo Hotel ။
09 4517 50051
09 7631 8 3167
သင်တန်းပြီးဆုံးပါက John Maxwell Team (member) မှ ပေးအပ်သော Official Certificate (နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်ပြု) ကိုလက်ခံရရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။
Normal Price: (၁) သိန်း (၅) သောင်းကျပ်
Early Bird Special Promotion: (၆၉,၅၀၀) ကျပ်
လူဦးရေ (၅) ယောက် နှင့် အထက် အတူတကွ အပ်နှံပါက တစ်ဦးလျှင် : ( ၅၉,၅၀၀) ကျပ်
2018 အတွက် ပထဦးဆုံး ပြုလုပ်သော သင်တန်းဖြစ်သောကြောင့် ပထမဦးဆုံး အပ်နှံသော အယောက် (၁၅၀) အတွက် သာ ဖြစ်ပါသည်။
(အစားအသောက်များ ပါဝင်မည် မဟုတ်ပါ)
✔ MEI ၏ " Unleash your Leadership Potential (ULP)" သင်တန်း တက်ရောက်ဖူးသော လုပ်ငန်းရှင်များ ရဲ. Feedback များ ✔
✅ Presentation Skill တွေ အရမ်းကို ကောင်းပါတယ်။ကျွန်တော်တို မသိတာတွေ အမှတ်တမဲ့ ဖြစ်နေတာတွေ ၊ သတိမထားမိတာတွေ အားလုံးကို သင်ယူရရှိခဲ့လို. အရမ်းကို အားရ ကျေနပ်မိပါတယ်။ ရင်ဘတ်ချင်းနီးအောင် ၊ Heart to Heart ဖြစ်အောင် လုပ်ပေးတဲ့ အစီအစဉ်ဆိုရင် အကြိုက်ဆုံးပါဘဲ။
CEO ~ Aung Gyi Group of Companies
✅ ဒီသင်တန်း အတွက် ပေးလိုက်ရတဲ့ အချိန်က ခဏလေးပေမယ့် တော်တော်များများ ကျွန်တော့် အတွေးတွေ စိတ်ကူးတွေ ပွင့်ထွက်ကုန်တယ်။ ဆရာ အရှေ.ကပြောနေတဲ့ အချိန်မှာပဲ ကျွန်တော် ဖြစ်ချင်တဲ့ အရာတွေက ဒါတွေပါလားဆိုတာ ဒိုင်းကနဲ ဒိုင်းကနဲ ထွက်လာတယ်။ သင်တန်းပြီးတဲ့ နောက်နေ.မှာပဲ ဝန်ထမ်းတွေကို လူမှန်၊ နေရာမှန် ရောက်အောင် Organization Structure ပြန်လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်။
U Moe Zaw Latt
TECHNO Engineering & Associates Co., Ltd
✅ သိထား တတ်ထားတဲ့ အရာတွေနဲ. ကိုယ့်ရဲ. ဝန်ထမ်းတွေကို သာမက ၊ အလုပ် အတူတူလုပ်နေတဲ့ Team Member တွေကိုပါ Attitude ပိုင်းပဲ ဖြစ်ဖြစ် ၊ အလုပ်အပေါ်မှာ Improvement ရှိစေမယ့် အရာတွေကိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဘယ်လိုမျိူး Transfer လုပ်ပေးရမလဲ ဆိုတာကို သင်ယူရရှိခဲ့ပါတယ်။
Daw Yu Yu Aung
Mya Power Fuel Station & Trading
✅ ဘယ်တော့မှ မရပ်ဘဲ သင်ယူသွားပါ ဆိုတာကို အကြိုက်ဆုံး ပါဘဲ။ ဒီသင်တန်းကို တက်လိုက်ခြင်းကြောင့် ရှေ.ဆက်ရမယ့် ဘဝရဲ. ရည်ရွယ်ချက်တွေ ၊ လမ်းကြောင်းတွေ ပိုပြီး ပီပြင်လာပါတယ်။သင်ကြားပေးတဲ့ ဆရာများကိုလည်း အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Khin Thidar Htay
Trainer Profile ??
ဦးပြေခိုင်သည် စင်္ကာပူနိုင်ငံရှိ Multi-National Corporation (MNC) များဖြစ်သော IBM, HP, DBS Bank တို့တွင် Consultant အဖြစ် (၈) နှစ် ကျော်ကြာလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။ ထို (၈) နှစ် ကျော်ကာလအတွင်း Technical Skills, Leadership, Finance, Economic, Education, Psychology (NLP) အစရှိသည့် ဘာသာရပ်များကို လေ့လာခဲ့ရုံသာမက Sydney, Singapore, Vietnam, Malaysia နှင့် Myanmar နိုင်ငံတို့တွင်လည်း သင်တန်းများသွားရောက်ပို့ချလျက် ရှိပါသည်။
သူသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် နာမည်အကျော်ကြားဆုံး Speakers, Trainers, Leader များဖြစ်ကြသည့် Tony Robbins, Sir Richard Branson, Dr John C Maxwell, Robert Kiyosaki, T Harv Eker, Blair Singer, Steve Wozniak ( Apple Co-Founder ) အစရှိသည့် ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်အနီးကပ် လုပ်ကိုင်သင်ယူခဲ့သူလည်း ဖြစ်ပါသည်။
သူသည် အမေရိကန်နိုင်ငံ NLP အဖွဲ့အစည်း (ABNLP) မှ အသိအမှတ်ပြုသော မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဆုံး Certified NLP Trainer & Coach တစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင်သူသည် အမေရိကား၏ နာမည်ကြီးလေးစားရသော Leader တစ်ယောက်ဖြစ်သည့် Dr. John C Maxwell ၏ official Certified John Maxwell Coach, Trainer & Speaker တစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါသည်။
နိုင်ငံတကာတွင်သင်တန်းများပို့ချခဲ့ပြီးနောက် မြန်မာနိုင်ငံတွင်လည်း လူသားအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာနိုင်စေရေးအတွက်ရည်ရွယ်၍ Myanmar Excellence Institute ( MEI ) ကို 2013 ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ Personal & Professional Development အတွက်ရည်ရွယ်ပြီး ဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။
MEI ရဲ့ဆောင်ပုဒ် " Empowering Lives Everyday " ဆိုသည့်အတိုင်း Company စတင်တည်ထောင်ချိန်မှ ယခုအချိန်ထိ မြန်မာနိုင်ငံတွင် စာပေဟောပြောပွဲ၊ Seminars ၊ Workshop & Training ( NLP, Personal & Professional Development, Leadership ) ပေါင်း ( ၆၀ )ကျော် သင်ကြားပို့ချခဲ့ပြီး လူပေါင်း ( ၇၃၀၀ ) ကျော်တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။
MEI ၏ Master Trainer အဖြစ်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး Sky Net, MRTV-4, MRTV, MITV, Reader Channel, CEO Magazine တို့တွင်လည်း Financial Education နှင့်ပတ်သက်သည့် အစီအစဉ်များ၊ NLP ကို အသုံးပြု၍ ဘဝအောင်မြင်ရေးဟောပြောမှုများ၊ Leadership ဆွေးနွေးပွဲများကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
"Everything Rises & Falls on LEADERSHIP"
" အရာအားလုံးရဲ. အောင်မြင်မှု ၊ ကျရှုံးမှုသည် ခေါင်းဆောင်မှု အပေါ်တွင်သာ မူတည်သည်"
Master Trainer & Coach Myanmar Excellence Institute - MEI
Also check out other Workshops in Yangon, Business Events in Yangon, Music Events in Yangon.
Map Mya Yeik Nyo Royal Hotel -Yangon, Mya-Yeik-Nyo Hotel(Yangon), Yangon, Myanmar
✗ SATIVA - OPENING PARTY w/ DJ CALIX I SHERRY-OU I LAFA